साउन भित्रै सबै परीक्षा सक्ने गरि त्रिविले थाल्यो तयारी,कुन कुन तहको परिक्षा कहिले ? - Mountain Media
साउन भित्रै सबै परीक्षा सक्ने गरि त्रिविले थाल्यो तयारी,कुन कुन तहको परिक्षा कहिले ?
काठमाडौं । महामारीका कारण रोकिएका सबै परिक्षा संचालन गर्ने तयारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको छ । महामारीले बीचमै परिक्षा रोकिएका कारण विद्यार्थीको पढाइ समेत अलपत्र परेको छ । निषेधाज्ञा सहज हुने वित्तिकै त्रिविले रोकिएका परीक्षा साउनभित्रै सकाउन तयारी थालेको छ । अब दुई दिनमै त्यसवारे निर्णय समेत आउने बताइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दुई दिन पछि नै त्यसवारे सूचना जारी गर्ने जनाएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार चल्दाचल्दै रोकिएका परीक्षाहरू सुरुमा सञ्चालन हुनेछन् । त्यसलगत्तै स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा हुने र यसका लागि दुई दिनभित्र सूचना जारी गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, स्नाकोत्तर, वैशाखमै तालिका सार्वजनिक गरेको एलएलबी र नियमित तर्फको स्नातकको चौँथो र पाँचौ वर्षको परीक्षा पनि हुनेछ । ति परिक्षा पनि दसैँअघि नै सक्ने गरी तयारी थालिएको बताइएको छ । यसका लागि अनलाइनबाटै फाराम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिक्षा केन्द्र समेत विद्यार्थी आफै अनुकुल ठाउँमा छान्न पाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । हाल मुलुकमा संक्रमणसँगै बाढी र पहिरोको प्रकोप देखिएकाले समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि परीक्षा दिन मिल्ने वातावरण बनाइदिने तर्फ त्रिवि लागेको हो ।
Previous: भोलि देखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नपाउदै आयो यस्तो दुखद खबर
Next: भोलिबाट लकडाउन खुकुलो बनाउंदै गर्दा संक्रमणको आज आयो यस्तो अपडेट